कोरोनाबाट बच्न के गर्ने, के नगर्ने ? « Yoho Khabar
उपाय र उपचार
काठमाडौँ – नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिएसंगै विस्तारै सरकारले पनि स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाई गर्दै लगेको छ । कोरोना संक्रमण दर बढेसंगै सरकारले सार्वजनिक स्थानमा भेला हुन र कार्यक्रम गर्न रोक लगाएको छ । विद्यालयहरु समेत बन्द गरिएको छ ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विद्यालय बन्द गर्दे र सार्वजनिक स्थानमा भीडभाड नगर्ने नियम बनाए पछि मंगलबार नै सार्वजनिक स्थानहरुमा सर्वसाधारणको उपस्थीति निक्कै पातलो बनेको छ ।
यो रोगबारे हामी सबैमा सही ज्ञान पनि हुनु आवश्यक छ । यो रोगको सङ्क्रमण देखापरेको व्यक्ति र अन्य सबैले उचित सल्लाह समयमा नै पाएमा यो रोगले भयानक रूपसमेत लिन पाउँदैन ।
कोभिड–१९ कोरोना अरू रुघाखोकी जस्तै एक किसिमको रुघाखोकी, फ्लु वा इन्फ्लुएन्जा नै हो । फ्लुलाई इन्फ्लुएन्जा पनि भनिन्छ जुन एक किसिमको भाइरसले गर्दा लाग्ने रोग हो । इन्फ्लुएन्जा गराउने भाइरस पनि तीन किसिमका हुन्छन् । ती हुन् इन्फ्लुएन्जा भाइरस ए, बी र सी । यी भाइरसको विशेषता फरक फरक हुन्छ । इन्फ्लुएन्जा भाइरसको सङ्क्रमण चरा चुरुङ्गी, सुँगुर, घोडा, अन्य जनावर लगायत मानिसमा पनि हुन्छ ।
आम नागरिकले के गर्ने ?
हात नमिलाउने, त्यसको सट्टा नमस्कार गर्न सकिन्छ । जस्तो– इबोलाबाट जोगिन कुहिना जोड्ने गरेका थिए ।
साबुन पानीले पटक–पटक हात धुने ।
अंकमाल नगर्ने ।
एक मिटर जति टाढा बस्ने ।
ज्वरो–खोकी लागेको मान्छेसँग नसुत्ने ।
झ्याल ढोका बन्द गरेर सानो कोठामा धेरैजना नबस्ने ।
जंगली जनावरलाई नछुने । बिरामी घरपालुवा जनावरको पनि सम्पर्कमा नजाने ।
भिडभाडमा नजाने ।
सर्जिकल मास्कको प्रयोग गर्ने । कपडाको मास्कले प्रदुषण मात्रै रोक्छ ।
कोरोनाको बिरामी भेट्न जान लागेको हो भने एन–९५ मास्क नै लगाउनुपर्छ ।
खोकी, ज्वरो र श्वास फेर्न गाह्रो भएको छ भने चेक गर्न जाने ।